Af-Isbaanish - Wikipedia
Isbanishka (/ spænɪʃ / (ku dhawaad ​​codka dhegeysanaya); Ku saabsan codkan español (caawimo · info)) ama Castilian (/ ku saabsan codkan maqal), ku saabsan codka castellano (help · info)), waa luqad Galbeedka Luqad ah oo ka soo jeeda Gobolka Castile ee Spain waxaana maanta lagu hayaa boqolaal malyan oo ku hadla afkooda hooyo ee Latin America iyo Spain. Waxaa badanaa loo tixgeliyaa luqada labaad ee ugu weyn dunida oo dhan, ka dib Mandarin Chinese.
Template:Country data Puerto Rico (United States)
Template:Country data CARICOM
File:Bandera CELAC.png CELAC
Template:Country data Mercosur
Template:Country data Organization of American States
Template:Country data United Nations
Template:Country data Union of South American Nations
Isbaanishku waa qayb ka mid ah kooxaha luuqadaha Ibero-Romance, kaas oo ka soo baxay dhowr luuqadood oo Vulgar Latin ah ee Iberia ka dib burburkii Boqortooyada Reer Galbeedka ee qarnigii 5aad. Qoraallada ugu da'da wayn ee luuqadaha Isbaanishku waxay kasoo jeedaan waqooyiga galbeedka Axia qarnigii 9aad, iyo markii ugu horreysay ee loo isticmaalo qoraalka luuqadda wuxuu ka dhacay Toledo, ka dibna caasimadda Boqortooyada Castile, qarnigii 13aad. Laga bilaabo qarnigii 16aad, Spanish waxaa loo qaaday isbaarooyinka boqortooyooyinka Isbaanishka, uguna muhiimka ah Ameerika, iyo dhulalka Afrika, Oceania iyo Filibiin.
Qiyaas ahaan 75% erayada casri ah ee casri ah waxaa laga soo qaatay luqada Laatiinka. Giriigga hore ayaa sidoo kale si weyn ugu tarjumay erayada Isbaanishka, gaar ahaan Laatiin, halkaas oo ay saameyn weyn ku yeelatay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af-Isbaanish&oldid=232222"
Last edited on 9 Maarso 2022, at 14:47
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Maarso 2022, marka ee eheed 14:47.